FAAFAAFIN+Sawiro: Camaliyaad Istish-haadi Ah Oo Lagu Weeraray Xerada Xalane. – Calamada.com
FAAFAAFIN+Sawiro: Camaliyaad Istish-haadi Ah Oo Lagu Weeraray Xerada Xalane.
calamada July 26, 2016 2 min read
Laba Qarax oo waaweyn ayaa barqanimadii maanta laga maqlay Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho oo ah saldhigga ugu weyn ee Kufaarta Afrikaanta ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya.
Qaraxyadan ayaa waxaa fuliyey laba halyeey oo ka tirsan Guutada Istish-haadiyiinta kuwaas oo bartilmaameedsaday laba xarun oo kala duwan oo ay joogeen ciidamada Afrikaanta ee taabacsan QM iyo kuwa isku magacaabay AMISOM.
Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay bar koontarool oo laga galo xarunta Xalane taas oo ay joogeen ciidamo Murtadiin ah iyo kuwa Afrikaan ah.
Qaraxan ayaa waxaa fuliyey walaal hogaaminayey gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, waxaana uu gebi ahaanba burburiyey dhismihii koontaroolka, Iyadoo wixii joogayna ay goobta dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen.
Waxaana intaas ka dib koontaroolkaas la qarxiyey ka gudbay gaari kale oo weyn kaas oo isna Camaliyad Istish-haadi ah ku beegsaday xarun kale oo ku taalla gudaha xerada Xalane, kaas oo hooy u ah ciidamo Afrikaan ah oo isugu jira Ilaalada UN-ka iyo kuwa isku magacaabay AMISOM.
In ka badan 20 Askari oo ka tirsan Kufaarta Afrikaanta ayaa lagu dilay weerarkaas, tiro intaas ka badana waa lagu dhaawacay sida ay noo xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta oo aan la xiriirnay.
Qaraxan ayaa sidoo kale burbur xoogan u geystay qeybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, kaas oo uu saameeyey raadadkii ka dhashay qaraxyadaasi.
Waxaa suuragal ah in qasaaraha uu intaas ka sii bato sida ay noo sheegayaan ilo wareedyadeena balse waan soo gudbin doonaa wixii ku soo kordha Insha’allaah.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 21-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 22-10-1437 Hijri.
1 thought on “FAAFAAFIN+Sawiro: Camaliyaad Istish-haadi Ah Oo Lagu Weeraray Xerada Xalane.”
Mad abshirow Maxamed says: